Salaadda La Santa Muerte Lacag. ? Wuxuu shaqeeyaa 24 saacadood!
U ducee Dhimashada Quduuska ah lacag Runtii waa mid awood badan waana sababta ay dad badani u sii wadaan ku biiraya safka rumaystayaasha iyo in ay jiraan mucjisooyin badan oo Saintani ay bixisay
Codsashada lacagtu waa shay caan ah, waxa aan la garan karin waa tukashadan codsigan qaaska ah, in kasta oo codsi kasta lagu samayn karo.
Qof kasta oo salaadda tukan waa inuu sidaas oo kale caqiidadiisa ku sameeyaa, iyadoo aan loo eegin ilaah la weydiisto codsigiisa maxaa yeelay tan waa ficil kaliya.
1 Dhimashada Quduuska ah ma i caawin doontaa?
2 U soo ducee Santa Muerte lacag
3 Waa maxay ducadan?
4 Goormaan tukanayaa salaadda Santa Muerte si aan lacag u soo jiito?
Dhimashada Quduuska ah ma i caawin doontaa?
Saint Tani way caawin kartaa qofkasta oo u soo dhawaada iyada oo rumeysata in waxa ay weydiisata ay macquul tahay
Si kasta oo ay u suurtoobi weydo waa in la arko waxa la weydiinayo, waxa ugu muhiimsan waa in laga warqabo in waxa la qabtay uu yahay ficil buuxa oo iimaan leh oo saafi ah ruux ahaaneed maxaa yeelay salaadu waa hub awood badan sidaas darteedna loo adeegsaday si xushmad badan iyo caqliga
U soo ducee Santa Muerte lacag
Geerida Sharafta leh, gabadhayda cadcad ee xoogga badan, saaxiibkay aaminka ah iyo wehelka aan ku kalsoon nahay dhammaan xilliyada nolosheena adag iyo kan adag, oo aan dhammaanteen ku faraxnayno inaan kugu aragno maalinta ugu dambeysa nolosheena.
Adiga oo yaqaana waxyaalaha qarsoon ee maalgashiga ah, u oggolow giraangiraha inuu si dabiici ah ugu weecdo halka dhibic uun keento.
Ii oggolow inaan kaqaybqaato xooggaaga oo ii yeer waxa aan kaa codsado, nasiib wanaag, barwaaqo iyo barwaaqo.
Meeshaadaadu waxay marag ka noqon doontaa isku xidhnaanta aan adiga kuu lahaan doono, adiga oo leh milgaha sirta weyn ee nasiibka iyo nasiibka.
Marwadaada xoogga badan ka saar neeftaada oo hanjabaadaha iyo khataraha igu soo food leh, ka fogee masiibo si iftiinka iftiinkaagu kuu gudbiyo, u gaaro kuwa u baahan.
Waxaad i siisaa nasiib wanaagsan, nasiib iyo ganacsi, fursaddaas ayaa imaanaysa albaabkayga, oo hodantinimada iyo barwaaqada gurigeyga ayay ku xukumaan.
Waxaan kugu mahad naqi doonaa hadiyado, Oo weligayba waxaad yeelan doontaa aaminnimadaada. Waad ku mahadsan tahay saaxiib aamin ah oo wehel u ah Gabadhayda Caddaan, Geeridayda quduuska ah way ku mahadsan tahay.
(Codsigaaga ku samee aaminaad badan.)
Tani waa duco aan aamini karno oo aan ku gaari karno yoolalka dhaqaale ee aan dejinnay.
Macno malahan sida ay u daran tahay ama u weyn tahay dhibaatada ay adag tahay.
Tukashadani waa mid awood leh oo caawin karta gudaha dhammaan xaaladaha dhaqaale taasi waxay ku dhici kartaa nolosha.
Lacagtu waa walaac maxaa yeelay la'aanteed ma lihin awood wax iibsasho oo muhiim ah.
Tani waa una oración taasi way naga caawin kartaa wax badan haddii aan qabanay xoogaa ganacsi xumo sida haddii aan ku jirno marxalad aanan si cad u ogayn maalgashiga aan sameyn karno.
Lacagtu si dhaqso leh ayay noogu soo noqon doonaan, si mucjiso ah, waana sababtaas loo tukan karo salaadda si xilkasnimo leh.
Goormaan tukanayaa salaadda Santa Muerte si aan lacag u soo jiito?
Daqiiqad kasta waxay ku habboon tahay in kor loo qaado tan iyo dhammaan salaadaha kale, waxa ugu muhiimsani waa in la ogaado waxa aan sameyno.
Ogaada inay tahay ficil iimaan iyo inaan helno mucjisadan aan weydiisaneynay, maadaama iimaan la'aantu aysan macquul aheyn in codsiyadeena jawaab laga helo, iimaanku waa furaha salaadda kasta.
U ducee Santa Muerte si aad u hesho lacag leh iimaan badan.
Salaad awood leh si Santa Muerte loogu talagalay shaqada